Fahazarana: Manaova Zavatra Mialoha
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Chiyao Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Luvale Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Myama Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Népali Oromo Ourdou Pangasinan Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Brezilianina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Télougou Vietnamianina Waray-Waray Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
MATOAN-DAHATSORATRA | AHOANA NO HANANANA FAHAZARANA TSARA?
2 Manaova Zavatra Mialoha
Efa tapa-kevitra ianao hoe tsy hihinana afa-tsy sakafo mahasalama, nefa mampilendalenda be itsy gilasy itsy.
Nanapa-kevitra ianao hoe tsy hifoka intsony, nefa notoloran’ny namanao sigara indray, na dia efa fantany aza fa te hiala amin’izany ianao.
Nikasa hanao fanatanjahan-tena ianao androany, nefa na ny mikaroka an’ilay tenisy fitondranao mihazakazaka aza hoatran’ny asa be!
Misy itovizany ireo zava-mitranga telo ireo. Efa imbetsaka no voaporofo fa manampy antsika hanana fahazarana tsara sy hiala amin’ny fahazaran-dratsy ny toe-javatra misy antsika sy ny olona ifaneraserantsika.
TORO LALAN’NY BAIBOLY: “Malina izay mahatsinjo ny loza ka miafina, fa ny tanora fanahy kosa mbola miroso ihany ka voa.”—Ohabolana 22:3.
Mampirisika antsika hitsinjo lavitra ny Baiboly. Ialao àry izay toe-javatra mety hisakana anao tsy hanatratra ny tanjonao. Miezaha kosa hitady fomba hanatratrarana azy io. (2 Timoty 2:22) Raha tsorina dia hoe manaova zavatra mialoha.
Ataovy izay hahatonga anao tsy ho mora resin’ny fakam-panahy, ary ataovy mora tanterahina ny zavatra mahasoa
Ataovy izay hahatonga anao tsy ho mora resin’ny fakam-panahy. Aza mitahiry haninkanina ao an-dakozia, ohatra, raha efa tapa-kevitra ianao fa tsy hihinana an’izany intsony. Ho sarotra kokoa aminao amin’izay ny ho resin’ny fakam-panahy hihinana haninkanina.
Ataovy mora tanterahina ny zavatra mahasoa. Alohan’ny hatory, ohatra, dia efa omano eo akaikin’ny fandriananao ny akanjo fanaovana fanatanjahan-tena, raha te hihazakazaka maraina ianao. Tsy dia sarotra mantsy ny manao zavatra iray, raha mora atomboka ilay izy.
Fidio tsara ny namanao. Mora maka tahaka an’izay olona mifanerasera amintsika mantsy isika. (1 Korintianina 15:33) Aza miaraka be amin’ny olona mampirisika anao hanana fahazaran-dratsy àry. Izay mandrisika anao hanana fahazarana tsara kosa iarahana.
TORO LALANA HAFA
“Ho hendry izay miaraka amin’ny hendry.”—Ohabolana 13:20.
“Ahazoan-tombony ny fandaminana mialoha ataon’ny mazoto.”—Ohabolana 21:5.
Hizara Hizara 2 Manaova Zavatra Mialoha
Azo Atao ny ho Salama Kokoa